Qandhoon Zikkaa - Wikipedia
Qandhoon Zikkaakan akksumasd huukkuba vaayrassii Zikkaa jedhamun kan bekkamud hukkuba sababavaayrassii Zikkaadhan kan dhuffuu dha.yerroo baay'ee malatoo hin qabuu, garruu yoo jirraatte bay'inaan salphaafi Qnadhoo bussaa wajin walfakkachuu danda'a.Malatooni argisisuu danda'uus qandhoo,dimmachuu ijaa,qiiqee dhukkuba mattaa fi suukii.Malatooni issaa walligalatti guyyaa torba gaddi tuura. Kannan duura jalqabba balfammu irrati dunni hin himamnee.Balfamnni kan walqabattuu rakkina dhuukubbaa guuliyan baarree (GSB).
Qandhoon Zikkaa kan walliti darbuu hida bokebiffa Ayideesii dhaaani.Akkasumas saallaandhiira irraa michuu quunamttii saallaa isaatii fi karra birraa immo kan darbuu danda'uu dhiiga nammaa qaamatti fudhachuniidha. Faalamnnii duubarttii ulfa irraa garra daa'imaati darbuun walqaabattee ulffa bu'uufiguuddina sammuu hinxuumuuramnee. Faalamni vaayrassii Zikkaa kan qooratammu fakkeenyaa dhigaa, fincaanii, haancuufa qorrachun asiidii riiboo nukuulikiiyeroo namnii dhuukuubsatuu.
mallotnni ittissaa kan off kessa qabuu isa hiidda bokkee nannoo dhuukubichi it umamee hirisuufi koondoomin fayadammuudhaani. Yallin hiidamaa booke hirrisuf kan fayyaduu farra illbissotadhaqna hunduumaa ufataan uffissuu saaphana bookee, fi lafa bishaan irra cissuu bakka bookeen horuu baleessuu. Talaalin hojjeettuu hin jiruu. Goorsii Ogeessoota fayyaa duubartoota bakkee faalamani 2015-16 ballaa Zikkaaulfa bassuuf yaaddun fi duubartootnii ulfa ta'aani bakka dhukkubaan faalammee akka hin demneefi dha. Yeroo wal'aansi bekkamuu hinjireetti paariisataamoolii(aseetamiinofeeni) yerroo dhuukuubii ni gaargaara. Hospitaala ciisuun tassa barbaachisa.
Vaayirassiin dhukkuubicha fiduu yaroo duuraaf bara 1947 tii baramee. Baqaqiinii yeroo duraaf ilma namaaratti galma'ee bakka kan fudhatee barra 2007 mootumaa nanoo Maaykronesiiyyaa tti. Script error: No such module "time".,dhuukuubichi biyyoolee digdama nannoo Ameeriikaa ti muul'ateera. Naannoo Afriikaa, eeshiiyyaa fi paasfikkiiitii mul'aachuun isaas beekammera. Sababa baqaqii Braaziilitti wagaa 2015 ti jalqabeendhaabatnii fayyaa adunyaalabsiiBalaa-tassaaa Fayyaa Haawaasa Dhima Addunyaaguraandhala 2016 ti labseera.
Waabbii[gulaali | lakkaddaa gulaali]
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Qandhoon_Zikkaa&oldid=31675" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 23 Fulbaana 2019, sa'aa 03:36 irratti.